President Emmerson Mnangagwa told mourners at Oliver Mtukudzi’s house outside Harare that the decision to confer national hero status on the musician was unanimously made by his government and ruling party.
Zimbabwean musician Oliver Mtukudzi. Picture: @CityofJoburgZA/Twitter
HARARE - President Emmerson Mnangagwa declared Zimbabwe’s internationally renowned musician Oliver Mtukudzi a national hero on Thursday, granting him a status following his death that has been a preserve for ruling party elites and independence veterans.
“We have agreed that he is a national heroe,” Mnangagwa said to cheers and ululation. The government will pay all expenses for his funeral.
Earlier, opposition leader Nelson Chamisa said there was no question that Mtukudzi was a national hero who unified the nation.